Imicimbi yabasebenzi-Iqela le-Huaihai Holding
I-Huaihai International Development Corporation yinkxaso-mali yeQela le-Siihai Holding. Inkampani yethu ikwindawo yeXuzhou yezoQoqo kunye nezoBugcisa (iZinga leLizwe) iHongihai Zongshen Park Park. Siyinkampani yamazwe amaninzi egxile kuphuhliso kunye nophando, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenethiwekhi yenethiwekhi yezithuthuthu, izithuthi zombane kunye nezinto zokuncedisa. Iimveliso zethu zithunyelwa ikakhulu kumazwe angaphezu kwama-60 nakwimimandla efana ne-Afrika, iAsia, kunye noMzantsi Afrika, ngokuthumela kumazwe angaphandle ngeedola ezingama-50 zeedola Inkampani yethu inamathela "kwibhanti, enye indlela, phuhliso lwangaphandle", inkampani yethu ithatha uhlobo oluzimeleyo kunye neendlela zokuthengisa ezifanelekileyo njengezinto ezinokubakho zokhuphiswano. Kule minyaka ingama-2-3 izayo, siya kwakha indawo yokwakha esisiseko enama-3-5 kunye neeofisi ezingaphezulu kwe-10 ukuze sibe lishishini lokulinganisa e-china.
Ngomxholo woxolo kunye nophuhliso, ilizwe liya lisanda kukhuphiswano kuqoqosho nakwisayensi nakwitekhnoloji. Kwimo yezoqoqosho ethe kratya yokuthengisa, ukhuphiswano lwehlabathi phakathi kwamashishini, kuhlalutyo lokugqibela kukhuphiswano lobulumko babantu, ngumgangatho ogcweleyo wabasebenzi kunye nophuhliso lwabasebenzi kunye nenqanaba lolawulo lokhuphiswano. Italente isisiseko seshishini, sesona sibonelelo sixabisekileyo kunye nolwazelelo lokusinda kunye nophuhliso lweshishini. Kwishishini ngalinye elikhulayo ngokukhawuleza nangokuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwehlabathi kufuneka lijolise kwizibonelelo zophuhliso loqoqosho kulawulo olusebenzayo kunye nophuhliso lwabasebenzi kunye nezixhobo zolwazi.
Ulawulo lwabasebenzi e-Huaihai lunamathela kumbandela woqoqosho lweemarike kunye nokubonelela ngesiqinisekiso sokuphuhliswa ngokukhawuleza kwe-Huaihai.
Nceda uthumele i-CV yakho ku huaihaihaiwai@126.com
Umphathi wezorhwebo lwangaphandle
Ngaphezulu kweminyaka emi-3 yamava okusebenza okuthengiswa kwezorhwebo, aqhelene nenkqubo yorhwebo lwangaphandle
Umoya ogqwesileyo wokubambisana kweqela, amandla okufunda anamandla, idigri yenqanaba okanye ngaphezulu, uphumelele kwi-English enkulu, i-majorm yorhwebo yamanye amazwe, ukuthengisa okukhulu okanye ukulawulwa kweshishini eliphambili.
CET6 okanye ngaphezulu.
Ukusebenza kwemida yemida ye-e
Ukuqhelana nemeko yokusebenza kunye nemithetho yokurhweba yeqonga lokurhweba kwi-intanethi yenkampani.
Unobuchule kwimithetho ethambileyo, unxibelelwano lokutshintshiselana, ukukhuthaza i-imeyile, ukukhuthaza i-SNS, ukuphakanyiswa kwe-BBS kunye nezinye iindlela zokunyusa.
Zilungiselelwe ngolwazi olusisiseko lwesiNgesi.
Ubuncinci iminyaka emi-3 yamava kwinkonzo yokuthenga emva kworhwebo lwangaphandle.
Ikholeji yasekholejini okanye ngaphezulu, zilungele iimeko zexesha elide zaphesheya.
Uxhotyiswe ngolwazi olusisiseko lwesiNgesi.
Ubuncinci iminyaka emi-3 yamava kulawulo lwezixhobo kurhwebo lwangaphandle.
Ikholeji yasekholejini okanye ngaphezulu, ixhotywe ubuncinci bezakhono zokubhala.
Amaxwebhu kunye nemicimbi yeendleko
Ubuncinci iminyaka emi-3 yamava kumaxwebhu kunye nemicimbi yesiko kwinkampani yorhwebo lwangaphandle.
Idigri yesidanga okanye ngaphezulu, urhwebo lwangaphakathi, ulawulo lweshishini, i-CET4 okanye ngaphezulu.
Ngaphezulu kweminyaka emi-3 yamava omsebenzi wokugqibela kwimizi-mveliso okanye kurhwebo lwangaphandle, uqhelene nezemali zamazwe aphesheya, irhafu, njl.
Idigriji yeekholeji okanye ngaphezulu ngentla kwezemali nolawulo lwezezimali.
Lowo unamava kulawulo lweendleko uyakhethwa.